မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာမိုဟာမက် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာမိုဟာမက် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက် တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းက မလေးရှားဘုရင့်ထံ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း စာတင်ခဲ့တယ်လို့ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီရာ မိုဟာမက်က သူ့ရုံခန်းကနေ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပဋိက္ခ ဖြစ်နေတဲ့ မလေးရှားမှာ သူ့ရဲ့ နှုတ်ထွက်မှုက ရှော့ အကြီးကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၉၄နှစ်အရွယ် ရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ မဟာသီယာက နိုင်ငံရေး ပြန်လည်သင့်မြတ်မှု ရရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြန်ဝင်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ပြန်လုပ်နေတာပါ။ သူက သူ့နေရာကို ဆက်ခံဖို့အတွက် အန်နဝါ အီဘရာဟင်ကို ရာထူး လွှဲပေးဖို့အတွက် ညွှန်ကြားခဲ့ပါ။ မဟာသီရာရဲ့ ပါတီဖြစ်တဲ့ ဘာဆာတူကတော့ သူ့ရဲ့ နှုတ်ထွက်ကြောင်း ကြေညာပြီးလိုက်တာနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကို …
မင်းသမီးလုပ်နေလို့ တက်တူးထိုးတာကို လျော့ထားသေးတာပါဆိုတဲ့ သင်ဇာ
မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ခပ်မိုက်မိုက် ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းနဲ့ ချောမောလှပတဲ့ မင်းသမီးချောတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ကာရိုက်တာတိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သူများနဲ့မတူတဲ့ ဖက်ရှင်ပုံစံတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံး ရရှိတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး..။ မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်စုံလေးတွေနြဲု့ကည့်ကောင်းသလို ခပ်မိုက်မိုက် ခပ်ဟော့ဟော့ စတိုင်လေးတွေနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေကို စပရိုက်လုပ်တတ်သူပါ..။ သင်ဇာတစ်ယောက် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည်ပုံဖော်မယ့် “ မြမြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်မယ့်အကြောင်း သိခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ဝေဖန်မှုတွေအများကြီး ခံခဲ့ရတာပါ.. သင်ဇာကိုယ်တိုင်က တက်တူးထိုးရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တာဖြစ်ပြီး အမြဲလိုလို တက်တူထိုးဖို့စဉ်စားနေမိပြီး ထိုးရမယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ်ထိုးချင်တဲ့ပုံ အချိန်အခါသင့်သွားခဲ့ရင် ထိုးဖြစ်သွားခဲ့တာလိုကလည်းဆိုပါတယ်။ သင်ဇာရဲ့ တက်တူးတွေကတော့ များသောအားဖြင့် မမြင်သာတဲ့ နေရာတွေမှာထိုးဖြစ်ပြီးတော့ မင်းသမီးလုပ်နေတာကြောင့် လူမြင်တဲ့နေရာတွေမှာ …
မေသန်းနုအမှုနောက်ကွယ်က တရားလိုဒေါ်စန်းစန်းမြင့်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေကို မျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ စင်ရော်မောင်မောင်
မေသန်းနုအမှုနောက်ကွယ်က တရားလိုဒေါ်စန်းစန်းမြင့်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေကို မျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ စင်ရော်မောင်မောင် အကယ်ဒမီ ငါးဆုရှင် မေသန်းနုတစ်ယောက် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် ကျခံခဲ့ရတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီး သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ …. ။ ဒီအမှုရဲ့ တရားလို ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်ကတော့ သူမအနေနဲ့ မေသန်းနုကို အရမ်းချစ်ပေမယ့် သူမဘဝပျက်ရတဲ့ အတွက် တရားစွဲဆိုခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ငွေပြန်ရရင် အကုန်ကြေအေးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ယနေ့မှာတော့ မေသန်းနုရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်း အကယ်ဒမီ စင်ရော်မောင်မောင်ကတော့ မေသန်းနု အမှု နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေကို ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ် …. ။ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်နဲ့ မေသန်းနု ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အမှု ၃ ခုကိုလည်း သေချာစွာ ရှင်းပြခဲ့ကာ သိန်း …
သူမရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ပက်သက်ပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာသူကို ပညာသားပါပါနဲ့ ပြန်လည်ချေပလိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ
ငပလီကမ်းခြေထက်က ရှာရှာရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာ အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့ပြီး သဘောကျနှစ်သက်သူတွေရော ဝေဖန်သူတွေရော အများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံရိပ်တွေ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း သူမရဲ့မန်နေဂျာဖုန်းကို သူမဖုန်းအထင်နဲ့ ညစ်ညမ်းစာတွေပို့တဲ့အပြင် အမျိုးမျိုးဖုန်းဆက်နှောက်ယှက်တာတွေနဲ့လည်း ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ကမ်းခြေမှာဆိုတော့လည်း ကမ်းခြေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဘီကီနီလေးဝတ်ရတာပေါ့နော်။ ဒီဝတ်စားဆင်ယင်မှုဟာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင် တယ်လို့ ယုံကြည်သူတွေကတော့ ရှာရှာ့ကိုအပြစ်ဆိုကြပေမယ့် ရှာရှာကတော့ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်နဲ့အညီနေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ လည်း ကမ်းခြေရောက်တုန်းအခိုက်မှာ လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်တာပါပဲ။ ဒီနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ကမ်းခြေထက်က ပုံရိပ်လေးတွေကိုဝေမျှတဲ့အချိန်မှာတော့ ဝေဖန်သူတစ်ဦးက ” လျှပ်ပေါ်လော်လီဝတ်တိုင်း နာမည်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော် နာမည်ကျနေလို့ attention ယူပြီး ဝတ်ပြမနေနဲ့ ” ဆိုပြီး ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ရှာရှာက ” အော် ဟုတ်ကဲ့ မီဒီယာတွေရှေ့ မျက်စိနောက်အောင်အမြဲတမ်း မထွက်ပြတာနဲ့ပဲ …
ငွေကြေးကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေမခံစားရစေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမှတ်ထားသင့်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ငွေကြေးကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေမခံစားရစေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမှတ်ထားသင့်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လူတစ်ယောက်က ဝင်ငွေဘယ်လောက်ပဲများများ အသုံးအစွဲနဲ့ပတ်သက်လို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေမထားထားဘူးဆိုရင် ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲတမ်း စိတ်ဖိစီးနေရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေမဖြစ်ရအောင်၊ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိတော့မှ မလိုတာတွေသုံးခဲ့မိတာကိုပြန်တွေးပြီး နောင်တရတာတွေမဖြစ်ရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီလိုစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းလေးတွေ သတ်မှတ်ထားလိုက်ပါနော် …။ (၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နေရာမှာ သုံးပါ အဝတ်အစားနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အသုံးအဆောင်တွေအတွက် ထိုက်သင့်သလောက်ပဲသုံးပြီး အလုပ်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် သင်တန်းတက်တာမျိုးကို ပိုပြီးဦးစားပေးပါ။ ဒါကသင့်ကို အမြင့်ရောက်စေနိုင်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်ပါတယ် …။ (၂) သူငယ်ချင်းတွေ၊ အမျိုးတွေကို ပိုက်ဆံမချေးပါနဲ့ တကယ်တော့ ပိုက်ဆံကဘယ်သူ့ကိုမှမချေးတာအကောင်းဆုံးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမျိုးတွေကိုတော့ လုံးဝမချေးပေးသင့်ပါဘူး။ ပြန်ရနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်အမုန်းခံရ၊ မိတ်ပျက်ရတတ်ပါတယ် …
ကိုယ်က ပေးမှ ပြန်ရတဲ့ အချစ်တွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ ပေးတဲ့ အချစ်တွေကို တန်ဖိုးထားပါ
ကိုယ်က ပေးမှ ပြန်ရတဲ့ အချစ်တွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ ပေးတဲ့ အချစ်တွေကို တန်ဖိုးထားပါ ကိုယ်က ပေးမှ ပြန်ရတဲ့ အချစ်တွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ ပေးတဲ့ အချစ်တွေကို တန်ဖိုးထားတတ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်က ပြုံးပြမှ ပြန်ရတဲ့ အပြုံးတွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးရွှင်ရီမောပြတတ်တဲ့ လူတယောက်ကို တွေ့ရတဲ့အခါ ….. ကိုယ့်ဘက်က အမြဲပေးနေရတဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ ကြင်နာသနားတတ်စွာ ခွင့်လွှတ်သည်းခံတာတွေ ကြုံရတဲ့အခါ …. ကျွန်မ ကမ္ဘာဟာ နေလို့ ပိုကောင်းလာပါတယ် ….. လူတွေရဲ့ သဘောက မရတဲ့အရာကို ပိုလိုချင်ကြတယ် …. ကိုယ်မစီးနိုင်တဲ့ သိပ်ဈေးကြီးတဲ့ကားကို …
အစ်မအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး နန့်လာပြီလို့ဆိုလာတဲ့ မထက်
မိန်းကလေးတွေအရှုံးပေးရလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လှပတဲ့မထက်ကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေသူတစ်ယောက်ပါ။မိန်းမလျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း မိန်းမအစစ်တွေအရှုံးပေးရအောင် အင်တာဗျူးတိုင်းမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေ့လေ့ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အချစ်ရေးအမြဲသိုဝှက်ထားလေ့ရှိသူ မထက်ကတော့ မကြာသေးမီကကျရောက်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူများနေ့မှာ ပရိသတ်တွေအံ့အားသင့်သွားရအောင် ချစ်ရသူကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ “အရင်တုန်းကလိုမျိုးတွေအရမ်းကြောက်တာတွေ ဘာတွေမရှိတော့ဘူး…ကိုယ့်ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေး၊ရိုးရိုးသားသား လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်သန်းမယ်..မဟုတ်တာလည်းမလုပ်ဘူး..အစ်မက ဘာပဲပြောပြောလေ ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ကိုကောင်းတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်… ကိုယ့်မိဘအပေါ်မှာပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်..ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ကောင်းအောင်တည်ထောင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဝလေးကိုအေးချမ်းစွာထပ်ပြီးတော့ အစ်မဖြစ်ချင်တာတွေ၊အစ်မသွားချင်တာတွေ၊ အစ်မလုပ်ချင်တာတွေ၊အစ်မချစ်ချင်တာလေးတွေပေါ့နော်..အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်ပြီးဖြတ်သန်းမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်” လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ မထက်ကတော့ သူချစ်ရတဲ့သူကို တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာတက်ကြွပျော်ရွှင်နေတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်အသွင်ကို ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပြီး အင်တာဗျူးမှာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းအောင် ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဓာတ်ပုံထဲကကောင်လေးနဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးကိုလည်း “ မောင်နှမတွေလိုပါပဲ..တမျိုးမထင်ပါနဲ့…နည်းနည်းပေါ့..အစ်မဘက်ကတော့ မရိုးသားဘူး…သူ့ဘက်ကတော့ ပတ်ပြေးနေတယ်” ဆိုပြီးတော့လည်း အရွှန်းဖောက်ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်နဲ့တွေ့ပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့ မထက်တစ်ယောက် …
အားလုံးကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်း နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
အားလုံးကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်း နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တစ်နေ့တစ်နေ့ မြင်ရတွေ့ရတဲ့အရာတွေအပေါ် စိတ်တိုင်းမကျတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုရတာ၊ တာဝန်တွေမဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ထဲကမပါဘဲ လုပ်ရတာတွေများလာတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ စုပုံလာပါတယ်။ဒီတော့ အခွင့်အရေးရှိလာရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမသုံးဘဲ၊ ကိုယ့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးမယ့်လူတွေနဲ့ မဆက်သွယ်ဘဲ အားလုံးကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး ၁၀ ရက်လောက် နေကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလာပါလိမ့်မယ်နော် …။ (၁) အတွေးတွေ ပြောင်းသွားမယ် အားလုံးကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်အရင်ကတွေးခဲ့ဖူးတဲ့အတွေးတွေ၊ လူတွေအပေါ်မြင်နေတဲ့အမြင်တွေက တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခံယူချက်ပါပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်သူတွေကောင်းလဲ၊ ဆိုးလဲ ဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားလာနိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက် လာနိုင်ပါတယ် …။ (၂) …
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့််အိပ်မက်ထဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်း(၄)ခု
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့််အိပ်မက်ထဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်း(၄)ခု တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်သူ့အကြောင်းတွေးအိပ်တာလည်း မဟုတ်ပါပဲနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အိပ်မက်မက်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြတယ်ဟုတ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာ သင့်ကို အံ့သြသွားစေမယ့် အကြောင်းအရင်းတွေ ရှိလို့နေပါတယ်။ သင့်အိပ်မက်ထဲကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဝင်ရောက်လာခြင်းဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်နော် … သူသင့်ကို သတိရနေလို့ ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲကို မဖိတ်ခေါ်ပဲ ရောက်လာတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကို သတိတရရှိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် အိပ်မက်ထဲကို ဝင်ရောက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ စိတ်တွေဟာ တကယ့်ကို အစွမ်းထက်လှပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြင်းပြစွာ သတိရတဲ့အခါမှာ အဲဒီ့လူရဲ့ အတွေးထဲ၊ အိပ်မက်ထဲထိတိုင်အောင် ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်း …
အစွမ်းထက်သော ဘုရား မျက်နှာသစ်ရေတော် ကျင့်စဉ်ကပ်နည်း
အစွမ်းထက်သော ဘုရား မျက်နှာသစ်ရေတော် ကျင့်စဉ်ကပ်နည်း ဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေကို နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဆက်ကပ် ရပါမည် ..။ ဆက်ကပ်သောအခါ မိမိမျက်နှာသစ်သည့် ရေကိုပင် ကပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏ နှုတ်မှ ဖြစ်စေ…” ဘုရား တပည့်တော်သည် အေးမြကြည်လင် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်သော ဤ မျက်နှာသစ်တော် ရေ ကို လှုဒါန်းပါ၏ ။” ဟုဆို၍ အနည်းငယ် အာရုံပြု့၍ ဆိုင်းငံ့ထားပါ …။ ထိုသို့ အချိန်အနည်းငယ် ဆိုင်းငံ့ထား ပြီးမှ ထို မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကို မိမိကိုယ်တိုင် သောက်ပါ။ မျက်နှာသစ်ပါ …။ သောက်တော်ရေဖလား သန့်သန့်တွင် ရေထည့်ပြီး ဘုရားကို ကပ်လှု …
ခါးတွေအရမ်းနာ ခေါင်းတွေလဲ တအားကိုက်တော့ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ မသောက် ချင်တော့ဘူး ဆိုသူ များ အတွက် နည်းဘမ်းလေးပေး ချင် လို့ပါ ။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်… မိမိကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်သလဲ….?
စနေသားသမီးများ လာဘ်လာဘကောင်းမွန်စေရန် ဒီလိုလုပ်ပါ…..
အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေရော၊ အိမ်ထောင်ရှင်မလောင်းတွေရော မှတ်​သားလိုက်​နာသင့်​​သော အချက်​များ
ည အိပ်ယာဝင် (၇) ခေါက် ရွတ်ပြီးအိပ်က လောကီအစီအရင် စုန်း နတ် ပယောဂ ကင်းစေသည့်ဂါထာတော်
This Year : 147077
Total Users : 442210
Total views : 1700319